Mini Sandblaster, Fitaovana fanapoahana fasika, Masinina fipoahana - Madio eo noho eo
FOMBA FITAOVANA FITAOVANA FITAOVANA METY
Miaraka aminao amin'ny dingana rehetra.
Avy amin'ny fisafidianana sy fikirakirana ny tsara
milina ho an'ny asanao amin'ny fanampiana anao hamatsy ara-bola ny fividianana izay ahazoana tombony miharihary.
Bench ambony Sandblaster Cabinet Mini Sand Blaster ...
Kabine ambony amin'ny sandbast ambony ...
Masinina famaranana barila Centrifugal 30L 60L 80 ...
Function: Ny ...
Tanana nitazona Sandblasting Gun Portable Pneumatika A ...
Fiarovana manohitra harafesina Air Sp ...
2021 New type automatique amponga amponga sandblasting ...
Mandeha ho azy sandblasting mach ...
Conveyor fehikibo mandeha ho azy fasika vary main'ny rivotra ...
Beltsand Converyor ...
Media momba ny famolavolana plastika
Famaranana faobe plastika Debu ...
B4C Venturi Boron Carbide Nozzles Coarse Threa ...
Ny fananan'ny ...
Vibrabtory tumbler milina miaraka amin'ny fonony
Vibratory tumbler miaraka amin'ny cove ...
Masinina fanapoahana fasika amin'ny fasika rano
Tungsten Carbide Sandblast nozera fanerena avo ...
Karazan-tsofina karazana milina famaohana fasika maina miaraka amin'ny Tur ...
Sandblasti maina karazana suction ...
Sandblast fiarovan-doha miaraka amin'ny mpanara-maso ny mari-pana
Masinina mahery vaika mandrehitra fasika mahery vaika ...
Natao ho an'ny scal ...
Masinina fanosorana vovoka electrostatic
Masinina famafazana elektrika ...
Basy sandblasting azo entina 90psi azo ovaina Sma ...
Famaritana: Vokatra siz ...
Hangzhou Shunjie Machinary Technology Co., Ltd dia (Hangzhou Huashengtong Machining Equipment co., LTD.)
dia famokarana matihanina sy fivarotana milina fanapoahana, masinina miparitaka, milina fandotoana, efitrano fipoahana,
fanapoahana fitaovana fanadiovana mahery vaika sy hafa amin'ny orinasa tsy miankina, manohana ny fivarotana mivantana ny karazana kojakoja rehetra, mora simba ny kojakoja;
Mandritra izany fotoana izany ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa manohana ny hanome vokatra avo lenta any an-toerana sy any ivelany vita amin'ny rivotra compressor.
Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny folo any Moyen Orient, Aostralia, Kanadà, Rosia, Eoropa ary Etazonia.
Junjie mifikitra amin'ny "hevi-baovao, fikatsahana ny hatsarana, fanatsarana haingana, fitantanana maharitra" filozofia orinasa; Ary ny "kalitao no asa voalohany", "
ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no fanomezam-boninahitra anay ”toy ny politikam-kalitao maharitra; Mikarakara ny tontolo iainana, miverina amin'ny fiaraha-monina,
fikarakarana ny mpiasa sy ny andraikitra ara-tsosialy hafa ho azy ireo; Raiso ny "fahamendrehana, andraikitra, fanavaozana, ekipa" ho tanjontsika sy tanjontsika tsy tapaka, manantena izahay fa hanome anao vokatra sy serivisy tsara kalitao!
Ampiasaina amin'ny sambo, rafitra vy, kaontenera, fiara, faritra misy fiara, visy, kojakoja samihafa momba ny fitaovana, marbra, tombo-kase, sary sokitra vato, boaty famantaranandro, plastika, kristaly, fitaratra,
seramika sy pataloha jeans marefo sy indostria hafa, manana endrika matihanina, famokarana, fametrahana ary fananganana ary serivisy aorinan'ny varotra lafatra izahay.
Ny vokatra Junjie series dia nandalo ny ISO-9001: fanamarinana ny rafitra kalitao iraisam-pirenena 2008, ary manana patanty 40 mahery,
ny vokatra dia ampifandraisina amin'ny tsena eropeana sy amerikana. Ny orinasa dia manana mpiasa injeniera sy teknika tena tsara,
ary koa ekipa injeniera misahana ny fikarakarana efa za-draharaha, amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra hanomezana toro-hevitra ara-teknika an'ireo mpampiasa,
fikojakojana sy serivisy hafa. Masinina sandblasting, efitrano sandblasting dia ampiasaina amin'ny fiara, lamba, fibre simika, fanafody, sakafo,
metallurgy, miaramila, vokatra elektronika, milina, fitaovana ary fiarovana ny tontolo iainana ary indostria hafa.
Masinina Sandblast mandeha ho azy ho an'ny marbra fanapoahana, vera, lovia vy, lovia vy
1.Ity andiam-milina ho an'ny fiaramanidina fandefasana automatique karazana sandblasting milina ity, hafainganam-pandehan'ny fifindrana misy fiovana nomerika fanaraha-maso Sandblasting hafainganam-pandeha, ny kalitaon'ny fikirakirana dia miorina, asa tsotra. 2. Ataovy amin'ny fehikibo mpampita mandritra ny fandidiana ny entana, ary ny sandblasti ...
Taom-baovao sinoa 2021
Hanao fialantsasatra lava isika ny 5 ka hatramin'ny 18 feb. Izahay dia tsy handefa entana Mandritra izany fotoana izany, fa mbola afaka mamaly mailaka ara-potoana ihany izahay.
Milina Sandblasting rano aondrana any Aostralia
Janoary / 19/2021
Milina tsy misy fangarony vy milina sandblasting rano paompy tsara 2.5KW, ary volavolan'ny fanamafisam-peo 415V Windshield wiper sandblasting professional gun ho fonosana amin'ny boaty Plywooden
Fanerena avo fasika fanapoahana fasika amin'ny vilany fanerena
Miverina any aoriana Ilay milina sandblasting misy boaty misy pressurized izay baikon'ny orinasa voatanisa ao amin'ny Jiaxing dia efa natolotra. Ny milina sandblasting misy tsindry mafy dia misy mpanangona vovoka sivana sy tanky fanerena. Mila ampiarahana amin'ny ai ...
Fitsipika sy fanasokajiana ny fihovan'ny vibration (1)
Entana fanodinana: ny milina fanaovana fikosoham-bary dia ampiasaina amin'ny bisikileta, ny ampahany maty amin'ny fanary aluminium, ny ampahany maty manary zinc, ny kojakoja fanaka, ny fitaovan'ny fitafiana, ny enta-mavesatra, ny kojakoja fitaratra, ny famantaranandro sy ny fiambenana, ny hidiny, ny kojakoja elektronika, ny firavaka isan-karazany, firavaka, vovoka ...